Saameyn Waxqabad: U Raadso Raadiyaasha B2B Si Fudud Ololahaaga Suuq Gelinta Saame ee Xiga | Martech Zone
Jimce, Maarso 19, 2021 Jimce, Maarso 19, 2021 Douglas Karr
Maanta, waxaan ku biiray in ka badan 100 kale oo saameyn ku leh B2B bilowgii Saameyn saameyn leh. Tani waa suuqii ugu horreeyay ee saamaynta ku leh saamaynta B2B ee loogu talagalay noocyada B2B ama B2C si loo ogaado loona shaqaaleeyo saamileyaasha tooska ah. Suuqa wax-u-saameeyayaasha is-adeegsiga caalamiga ah waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay isku xireysaa suuqleyda sumadaha leh saameyn wax ku ool ah oo dhistay sumcad muhiim ah oo soo socota iyo sumcad lagu kalsoonaan karo kanaallo kala duwan. Shirkadda waxaa aasaasay Anthony James ("AJ"), oo haysta ku dhowaad 30 sano oo khibrad suuq geyn ah isla markaana isagu ah saamile caan ah oo leh in ka badan 2 milyan oo raacsan LinkedIn.
Helitaanka Saameeyayaal Waa Caqabad
Suuqgeyaasha adduunka, helitaanka saamaynaha saxda ah ee sare u qaadaya astaanta isla markaana bixinaya khidmadda ay dalbanayaan ayaa muddo dheer ahayd arrin ku saabsan suuq geynta saamaynta, gaar ahaan SMBs. Sidoo kale, astaamaha B2B way ku xadidan yihiin ka faaiidaysiga suuq geynta saamaynta waxayna inta badan ku tiirsan yihiin qoraalo la kafaala qaaday ama xayeysiin, taas oo noqon karta mid qaali ah oo aan waxtar lahayn. Kobaca kharashka badan ayaa la saadaalinayaa suuqgeynta saamaynta, laakiin helitaanka saamileyaasha saxda ah waxay caqabad ku noqon kartaa ganacsiyada.
Firfircoonida firfircoon waxay kaa caawin kartaa kicinta saameynta adiga oo ku siinaya suuq dadweyne oo saameyn ku leh saameyn ku leh oo si fudud loo sifeyn karo. Madal:
Waxay bixisaa labadaba muuqaal wax-ku-ool ah iyo sidoo kale waxay bixiyaan - oo leh qiimeyn hufan.
Saameeyayaashu waxay bixin karaan waxqabadyo ay kujiraan kuhadal, soo bandhigid dalwad ah, dadaal suuq geyn ah, dhiirrigelinta warbaahinta bulshada, ama wax kasta oo ay bixiyaan.
Waxay ufududeyneysaa howsha suuqleyda B2B si ay uhelaan saamile sax ah wershadaha toosan ee saxda ah qaab ka qiimo jaban si ay u taageeraan hoggaankooda gen iyo ololeyaasha wacyi gelinta calaamadaha
Dimuqraadiyadu waxay fursad u siisaa dadka saamaynta ku leh waxayna siisaa dariiq sinaan la’aan si ay uga helaan ugana qayb galaan 11 dal, Maraykanka, Aasiya-Baasifiga, iyo Yurub. Waxay bixisaa isku-darka heerka koowaad ee 30 + milyan oo qof iyo isku-xir ay gaaraan 150 + milyan oo qof - tirooyin maalin walba sii kordhaya.
Waxay bixisaa isgaarsiin toos ah oo ka timaadda suuq-geynta wax-soo-saare kasta iyo hanaan fudud oo loogu midoobo iyaga ololaha suuq-geynta si loo kordhiyo saameynta
Waxay bixisaa aag kobcin cusub oo loogu talagalay warshadaha MarTech iyada oo la isku xirayo saamileyda ganacsiga (B2B) iibsadayaasha B2B. Waagii hore, saamileyaasha B2B ma aysan awoodin inay ka ganacsadaan shabakadahooda sababtoo ah xannibaadaha LinkedIn, iyo sida kaliya ee shaqsi saameyn ku yeelan karo saameyn uga yeelan karo LinkedIn waa bixinta hadda jirta sida qorshooyinka InMail. Qoraalada la isboonsar gareeyay ee LI waa qaali oo waxtar la'aan.
Waxa ugufiican dhamaan, majiro khidmadaha rukunka ama aad ubaahantahay inaad soo dirto warbixin kooban oo uu soosaaray dhexdhexaadiye. Ka-qaybgalku waa toos u dhexeeya ganacsiga iyo saamileyda, waxaana jira kharash keliya haddii wax-ku-oolku oggolaado inuu la hawl galo.
Eeg Macluumaadkeyga iyo Ku Bixinta Saameynta Waxqabadka
Tags: keydka xogta b2bsuuqa saamaynta b2bsaamaynta b2bhel raadinta b2braadso saameynkeydka xogtasaameyn leh